Mampahafantatra ny Auto miantso Vandal porofo mifono vy No-miantso vonjy taitra HOTLINE Telephone finday JWAT205-News-Ningbo Joiwo Fipoahana porofo Teknolojia Co., LTD
Ampahafantaro ny Auto dial Vandal proof Fiarovan-telefaona an-tariby telefaona an-tariby JWAT205
FIAINANA: 2021-06-08 HITS: 1
Introduce of Auto dial Vandal proof Armored No-Dial hotline Telephone telefaona vonjy maika JWAT205。
Fonenana 2.Robust, vita amin'ny vy mangatsiaka miaraka amin'ny vovoka mifono
5.Hotline finday. Rehefa alaina finday dia hiantso ny telefaona mandeha ho azy ny telefaona.
6.Ny laharana telefaona finday dia azo apetraka ary ovaina raha ilaina.
7. Mikra-peo manafoana feo azo ampiasaina.
9. Fiarovana porofo IP54.
10.Connection: tariby mpivady terminal RJ11 / RJ45.
11.ny loko miloko azo.
12. Ampahany amin'ny finday vita amin'ny telefaona.
13.CE, FCC, RoHS, ISO9001 no mifanaraka.